दिदी भाइको अनैतिक खेल | Kamsastra
Sex, दिदी भाइको अनैतिक खेल, दिदीभाई, नेपाली यौन कथा,
एक दिन बेलुका के काम परेर भाइको कोठामा गाको त..........................मेरी बास्सै मरी गएं नी । मोरा त आफ्नो यत्रो सामान निकालेर खेलाउंदै रछ । मेरो त मन ढक्क फुलेर आयो । ऐ............के गरेको यस्तो भन्दै म हत्तनपत्त लाजले बाहिर निस्कें । त्यसलाइ पनि लाज लागेछ क्यार । म निस्कने बितिकै ड्याम्म ढोका बन्द गरो । कोठामा आएर तेसकै बारेमा सोच्दै थे । मोराको सामान त कत्रो रैछ । मेरोमा छिराउन पाए पनी हुन्थो जसतो लागो । एकछीन पछी आएर दिदी प्लिज ममिलाइ नभन्दे है भनेर म्याउंम्याउं गर्न थाल्यो । दिदी ममिलाइ नभन्दे है म तैले भनेको जे पनी मान्छू भनेर मेरो हाततिर सुमसुमाउ थालो ।मलाइ माया लागो । मेरो मनले भने फेरी तेलले आफ्नो सामान निकाले पनी हुन्थो जस्तो लागीरहेको थियो । मोरा अनि ढोका नलाइ त्यस्तो गर्छन त ? गाली गरेजस्तो गरेर च्याप्प समाएंर गालामा टोकीदें ।
राती ममी तल भान्सामा गएको बेलामा के गर्दैछ । आज भने जाल हान्नु परो भनेर त्यसको कोठामा गएं । कोठामा त्यो त मोबाइलमा शायद पोर्न भिडियो हेर्दै थियो होला म जाने बितीकै मोबाइल सिराने तीर हालीहालो । जाडोको बेला थीयो । "ए के हो खै " भनेर मैलै मोबाइल खोसें । भरखर हेरेको क्लीप रन थीयो । "पख तं यस्तो राख्छस ममीलाइ आजचैं नभनी कां छाड्छु र" भनेर त्यस को मोबाइल बोकेर हीडेजस्तो गरें ।
ए पख ममीलाइ भनीस भने मार दीन्छु भनेर झम्टेर आयो । म पनी भागे जस्तो गरें । ऊ मलाइ खेद्दै आएर च्याप मेरो हात समातेर मोबाइल खोस्न थाल्दा मैले जानीजानी दूधले उस को जीउमा धक्का दीएं । अघी देखीनै मोबाइलमा ब्लु फील्म हेरीरहेको उसको उत्तेजना म अझै बढाउन चाहन्थें । मलाइ पनी हेर्न दे है त । उससंगको कृतीम लडाइमा हारे जसतो गरेर मैले मोबाइल फिर्ता दीदैं भने । तं पनी हेर्छस र छ्या नहेर उ फुत्कन खोज्यो म भने मुडमा थीएं । मैले आजचैं जसरी भा पनी रुपेशको दरो सामानको मजा लीन्छु भनेर सोचीसकेको थीएं । के हून्छ त तैले हेर्दा हून्छ मैलै हेर्दा हूंदैन भनेपछी हामी दुबै जना ओछ्यानमा गयौं । दिदि एउटा कूरा भन्छू तं नरिसाउने भा उसले भनो ।
"मैले बीहान तैलैं नूहाएको देखें नी ।"
"मलाइ थाह थीयो तैले हेरेको"
"तलाइ लाज लाजेन"
"के को लाज अस्ती तैलैं मलाइ आफ्नो डन्डा देखाको हैन"
"त्यो त तैलैं हेरेको थीस भन्ने मलाइ के था त"
"भो भो गफ न दे तं पनी मेरो जीउ हेर्न खुब खोज्छस मलाइ सब था छ ।"
"अब के लजाउंछस ल मलाइ तेरो मोबाइलको फील्म देखा" मैले उसको बाटो खोली दीएं ।
"हेर दिदि यो क्याम्पियन कलेजको ।" कलेज ड्रेसमा रहेकी एउटी केटीलाइ पछाडीबाट सम्भोग गरेको त्यो क्लीप मैले पनी निताको मोबाइलमा हेरी सकेको थीएं । तैपनी मैले आज भाइसंग हेर्ने मौका पाएको थीएं । दुबै जना ब्ल्यांकेट ओडेर बसेका थीयौं ।
"खुब मजा हुँदो है- दिदि" रुपेशले भन्यो ।
"मलाइ के था त । मैले यस्तो गरेको भा पो त ।" मैले कैले नगरेजस्तो गरेर भनें । मनमनै भने तलाइ के था कती मजा आउंछ भन्ने कुरा । आज तलाइ मजा चखाउंछु भन्ने लागिराको थीयो
"ए तेरो डन्ठा देखान अस्ती मजाले हेर्नै पाइन" मैलै भने ।
"पख है त" भन्दै उसले आफ्नो लठ्ठी जस्तो सामान निकालो ।
"आमूइ कत्रो र छ" मैले आश्चर्य चकीत हुंदै भने । हातले च्याप्प समातेको त तातेको फलाम जस्तै भा रैछ ।
"दिदि तेरो दुध पनी चलाउन दे न ।" रुपकले भन्यो ।
"मैले ए मोरा यसरी हैन क्या । मजाले माडनु पर्छ । भोली बुहारीको पनी यसरीनै छुइस मात्रै भने त भाग्छे नी ।" भनेर उसको हात समातेर आफ्नो पन्जाले चार पांच पटक थीची दीएं । अब उ पनी मजाले चलाउन थाल्यो ।
उतेजीत हूंदै उसले दिदि "मेरो खेलाइ दे न । कस्तो मजा हूदो रैछ । केटीको दुध माडन त" भन्न थालो ।
"ए अनु.................ए रुपेश तीमीहरु के गर्दै छौ हँ ।" तलबाट ममिले कराउनु भयो । ला बुढियाले था पाइन की क्या हो भनेर मन ढक्क फुल्यो । ल अब भूजा खान आयो । ल भयो हीन भूजा खान । अनी आएर गरुमला ।
भनेर मैले ब्रेसीयरको लगाएं । खाना खादै गर्दा ममी उफ अनू आज कस्तो टाउको दुखी राछ । भन्न थाल्नु भयो । मैले ममि म भांडा माजी हाल्छू नी हजूर आराम गरिस्यो । भनेर बुढियालाइ फकाएं । खाना खाएर यसो सोचें बुढियाले हाम्रो खेल था पाईन भने त मार्छीन । अनी मैले बुबाको ‌ओषधीको प्याकेटमा हेरे स्लीपीङ ट्याबलेट रछ । अनपढ बुडियालाइ के था । अनी ममिको कोठामा गएं । ममि सुतीस्यो । छैन हेर न कस्तो टाउको दुखीराछ थीच्देन । ममिले भन्नुभयो । मैले आ ममि थीचेर के हुन्थ्यो ल ओषधी खाइस्यो भनेर स्लीपीङ ट्याबलेट दीएं । खै के हुन्थ्यो यो ओषधीले ममिले भन्नुभयो । मैले आराम गरिसो न । म टिभि हेर्छु भनेर गएं ।
एकछीन सीरीयल हेरें । रुपेश आयो । मैले आंखा सन्काएं । अनी हामी दुबै जना रुपेशको कोठामा गयौं । ए रुपेश तेरो सामान भनेपछी उसले जिन्स पाइन्टको चेन खोलेर रनक्क रीसाएको सामान झीको । मैले पूरै पेन्ट खोल्न भनेपछी उसले खोल्यो मैले उसको सामान मुखमा हालेर मुख मैथुन गर्न थालें । दीदी प्लीज तेरो पनी देखा न भन्न थालो । मलाइ पनी अब छीराइ दे हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालीसकेको थीयो । मैले स्कर्ट मास्तिर फर्काएं । खुट्टा फैलान रुपेशले भन्यो । मैले तिघ्रा फैलाइदीएं । दुइचिराका बिचमा एउटा प्वाल । त्यो त मजाले हेरेको हेरै गर्न थाल्यो । अनी आफ्नो दुइ वटा अउँला ल्याएर भीत्र पसायो । मैले हात हटाइ दीएं तर मैले नहटाओस भन्ने चाहेको थीए । ल भयो अब जान्छु सुत्न भन्दै म उठें । दीदी प्लीज नजान । उसले मलाइ आफूतीर तानो । अनीता तिमिहरुको प्वालमा कसरी छीर्छ हँ ? उसको यो प्रश्नले मलाइ बडो आनन्द आयो । म पनी यहि चाहन्थें । " थाह छैन ... तं प्रयास गर्छस त ... छीराएर हेरन ... शायद छिर्दैन होला ... !" मलाइ पनी थाह थीयो उसलाई पनी थाह थीयो ... किन पस्दैन थीयो होला र। "त्यसो भए म के गरुँम् त ... कसरी पसाउने ...? " "यसो गर तं ममाथी चढेर तेरो लीङ्ग मेरो योनीमा राखेर कम्मरले ठेल जान्छ कि...लु आइज चढ... !" मनमनै मलाइ आनन्द हुन थालीसकेको थीयो । उ त अगी देखी नै नांगै थीयो । मैले पनी आफ्नो स्कर्ट खोली सकेको थीएं । उ माथी दढेर एक पटक हुत्त पारो के छिर्दैन थियो । मेरो योनीले टन्न पानि फ्यांकेको थीयो ।
अबुइ दीदी क्या मज्जा हूदों रैछ । पख तेरो पुरै पसेको छैन अली बल गर । उ माथी सुतेर धक्का मार्न थाल्यो ।
" आहह ... रुपक ... कती मजा आयो ... गर गर छीटो गर मलाइ मजा दे ... भित्र बाहिर गर अरु अरु हान्न हान ... " उ मच्चीन थाल्यो । मलाइ खुब मजा आइ रहेको थीयो । उ पागल जस्तै भएर घरी मेरो गाला घरी मेरो ओठ घरी गर्दन चुमी रहेको थीयो । दुध पनी मोलीरहेको थीयो । स्यां स्यां ए दिदि मजा आयो क्या मजा हूदो रैछ
"दिदि ... दिदि...मेरी प्यारी अनु आह... ... ... ...हा ... ...हा" गर्दै थीयो । यसको डन्ठाले पीच्कारी हानी गो ।
मलाइ भने पुगेकै थीएन । अब के गर्ने होला तैंले त खत्तम पारीस नी मलाइ... ... ... ...उ पनी पछुताउमा थीयो
ला दिदि नहुनु भइगो ... ... ...हैन मैले त्यो भनेको हैन । मलाइ पुरा मजै आएन । तेरो बिर्य झरि गयो ।
ए दिदि फेरी उठ्छ होला । मैले हस्तमैथुन गर्दा तिन चार पल्टसम्म निसकिन्थियो । हो र ... ... फेरि सक्छस त
म खेलाउंछू है त हैन मै खेलाइ दिन्छु ... ... ... ... भनेर मैले उसको लीङ्ग खेलाउन थालेको त फेरी उठ्यो
रुपेश अब भने हतार नगरी कन विस्तारै समय लगाएर गर है ... ... भने उसले त्यसै गरो । नभन्दै उसले मलाइ तिन पटक पुरा समय लगाएर सम्भोग गरो । यस्तो आनन्द त कहीले आएको थीएन । अब फेरी फरी पनी गरुंम है दिदि ... ...ल ल अब सूत राती ३ बजे मात्रै हामी सुतेउं । भोली पल्ट तल्लो पेट कटकटी खायो । योनीमा पनी पोली राको थीयो । बेलाबेलामा दिदि भाइ सुत्ने गर्छौं । कसैलाइ शंका हुने कुरै छैन । अर्को महीना महीनाबारी भएन । कहीलेकांही त तलमाथी हुन्छ तैपनी मलाइ शंका लागेर चेक गराएं । थ्याङक गड पेट बसेको रैन छ । आजकल भने म अली सतर्क भएकी छू ।
Labels: Sex, दिदी भाइको अनैतिक खेल, दिदीभाई, नेपाली यौन कथा